मेगास्टार अनमोलदेखी ज्योतिष र नर्सको रोमान्ससम्म - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
मेगास्टार अनमोलदेखी ज्योतिष र नर्सको रोमान्ससम्म
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्म बृत्तमा के कस्ता गतिविधीहरु भईरहेका छन्, यसको वारेमा दैनिक रुपमा जानकारी गराउने हेतुले फिल्मी फण्डाले दिनभरको मूख्य समाचारहरुको सँगालो सहित एक क्लिक पूर्ण खबर प्रस्तुत गरेका छौं । जुन हरेक दिन बेलुका ७ बजे प्रकाशित हुनेछ । दिनभर मनोरञ्जन समाचार आफ्ना निजी कारणले हेर्न नपाएका वा पढ्न नपाएका पाठकहरुलाई मध्य नजर गर्दै फिल्मी फण्डाले एक क्लिक पूर्ण खबर प्रस्तुत गर्न गईरहेका छौं । आजको मूख्य समाचारहरु यस प्रकारका छन् ।
यस कारण अनमोल मेगास्टार
फिल्मी फण्डा । हुन त एउटै फिल्म खेल्ने कलाकारलाई पनि स्टार भन्ने नियम भएको उद्योग हो नेपाली फिल्म उद्योग । सरकारले उद्योगको मान्यता नदिएपनि कलाकर्मीले उद्योग नै भन्न थालिसकेका छन् । यहि उद्योगमा डेब्यु कलाकारलाई पनि स्टार भन्नेहरु धेरै छन् । यसको साथै एउटा फिल्म हिट भएपछि अर्को फिल्म खेल्नासाथ सुपरस्टार भईहाल्छन् । स्टार भन्ने शब्दलाई कसले मापन गर्ने रु कसले के आधारमा स्टारको मापन गर्ने कुनै आधार छैन नेपाली फिल्म क्षेत्रमा । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा मात्र हैन बलिउड र हलिउडमा पनि यसको कुनै पुष्टि आधार छैन । तर जे होस् बलिउड र हलिउड ले स्टारलाई पनि धेरै तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । स्टार, एक्शन स्टार, रक्स स्टार, सुपरस्टार, स्टाईलिस स्टार, मेगास्टार यस्तै यस्तै धेरै । बलिउड र हलिउडले एउटै कलाकारको व्यक्तित्व, लगाव, उसको काम, फ्यान फलोअर्स र समयको वर्गिकरणमा स्टारका विभिन्न रुपहरु निर्धारण गर्ने गरेको छ । बलिउडमा हेर्ने हो भने १० भन्दा बढि फिल्म ब्लकबष्टर बनाएका सुपरिचित कलाकारलाई मेगास्टार भन्दै आएका छन् । बलिउड भित्रै दक्षिण भारतीय फिल्महरुमा भने ५ वटा ब्लकबष्टर फिल्म दिएका सुपरिचित कलाकारलाई मेगास्टार भन्दै आईरहेका छन् । हलिउडमा त केही फिल्मका कलाकारलाई मात्रै मेगास्टार भन्ने चलन छ । नत्र पप स्टार र रक्स स्टारहरुलाई विशेषगरि हलिउडमा मेगास्टार भन्ने गर्छन् । बलिउडमा हेर्ने हो भन्ने विभिन्न मिडियाले स्टारहरुलाई विभिन्न रुपमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान लगायतलाई विभिन्न मिडियाले मेगास्टारको ट्याग भिँडाएका छन् । कुनै कुनै मिडियाले त नयाँ कलाकारहरु जो अन्यको तुलनामा बढि हिट छन् तीनीहरुलाई पनि मेगास्टार भन्न थालेका उदाहरणहरु छन् ।
सलमान खानलाई पनि १० वटा भन्दा बढि फिल्म ब्लकबष्टर बनाएको भन्दै स्टार न्युजले मेगास्टारको संज्ञा दिएका हुन् । यस्तै अजित कुमार तामिलबाट आएका अभिनेता हुन् । उनलाई पनि बलिउडका मेगास्टार भन्ने गरिन्छ । अभिनेता चिरञ्जीवी, राम चरण दक्षिण भारतसँगै पुरा बलिउडमा मेगास्टारको रुपमा चिनिन्छन् । ५ वटा ब्लकबष्टर फिल्म दिएदेखी उनीहरुलाई मेगास्टारको रुपमा सम्बोधन गर्ने गरेको भारतीय मिडियाहरुबाट बुझ्न सकिन्छ । भारतमा ब्लकबष्टर भन्नाले कारोवारको सय करोड भन्ने बुझिन्छ । बलिउडमा कुनै कुनै मिडयाले मेगास्टारको कम्तिमा १० लाख भन्दा बढि फ्यान फलोअर्स हुनुपर्ने पनि दावी गरेका छन् । नेपालमा पनि धेरै बर्षदेखी लगातार फिल्म गरेका र कमर्सियल रुपमा चलेको सबै भन्दा बढि फिल्म खेलेका राजेश हमाललाई महानायकको संज्ञा दिएका छन् । न राजेश हमालले त्यो ट्याग मागेका थिए न सरकारले ठमाएका थिए । दर्शक, शुभचिन्तक र फिल्मकर्मी ले नै उनको लगाव, फिल्मको बढि संख्या र कमर्सियलका हिसाबले महानायकको संज्ञा दिएका हुन् । यस्तै भुवन केसीलाई सदावहार नायकको संज्ञा दिएका छन् । यो पनि उनको मेहनत, लगाव र निरन्तर राम्रो फिल्म दिएका कारण सदावहारको ट्याग दिएका हुन् । शिव श्रेष्ठलाई पनि एक्शन स्टारको उपमा नेपाली फिल्म क्षेत्रमा दिएका हुन् । यसैको आधारमा अनमोल केसीलाई मेगास्टार भन्दा खासै केही फरक पर्दैन । किनकी जसरी बलिउड र नेपालमै विभिन्न तरिकाले स्टारहरुको रुप निर्धारण गरिएको छ त्यसरी नै अनमोल पनि मेगास्टारमा परेका हुन् । फिल्म होस्टेल, ड्रिम्स, जेरी, गाँजलुदेखी कृ सम्म आउँदा उनले पाँच ब्लक बष्टर फिल्म दिईसकेका छन् । सबै फिल्मले करोड क्लव पार गरेका छन्, त्यो पनि निर्माताको हातमा पर्ने गरि । क्याप्टेन र ए मेरो हजुर ३ पनि ब्लकबष्टर हुनेमा दुईमत रहँदैन ।
अनमोलको सामाजिक सञ्जालमा मात्रै तीन लाख भन्दा बढि फ्यान फलोअर्सहरु छन् । सबै नेपालीहरुमा हेर्ने हो भने १० लाख भन्दाबढि शुभचिन्तक अनमोलका रहेका छन् । सरकारमा रहेका अधिकांश प्रधानमन्त्रीदेखी मन्त्रीहरु, नेताहरु र स्कुल प्रवेश गर्दै गरेका भाईभाईबहिनीहरुलाई अहिलेका पछिल्लो समयका हिरो को हुन् भनी प्रश्न गर्ने हो भने पहिलो उत्तर अनमोल केसी आउँछन् । यतिमात्र हैन विश्वभरी छरिएर बसेका नेपालीहरुले अनमोल केसीलाई राम्रो तरिकाले अग्रस्थानमा राखेर चिन्ने गरेका छन् । यस कारण यी आधारले बलिउडले मेगास्टार भन्न सक्छन् भने नेपालमा अनमोललाई भन्न किन हिच्किचउने रु तर पनि अनमोलले आफुलाई मेगास्टार वा अन्य स्टार भन्दापनि अभिनेता अनमोल केसी भनेको सुन्न रुचाउँने बताएका छन् । यस्तै आधारमा प्रदिप खड्का पनि सुपरस्टार हुन् । फिल्म रोज हिट भएको भए र आउने फिल्महरु पनि हिट हुने हो भने प्रदिप पनि मेगास्टारको लाईनमा जान सक्ने कलाकार हुन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले कुनै नामको ट्याग झुण्डाउने हो भने त्यसको मापन कसरी गर्ने भनि सोच्नुपर्छ । जुन नेपालमा छैन । बलिउडकै तरिकालाई आधार मानेर हेर्दा नेपालको लागि अनमोल मेगास्टार भईसकेका छन् ।
ज्योतिष र नर्सको फिल्मी लुक्स ‘शुभलभ’ पोष्टर
फिल्मी फण्डा । फिल्म ‘शुभलभ’को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ । फिल्मको सार्वजनिक पोस्टरमा दुई मुख्य पात्र हरिहर अधिाकारी र कृष्टिन पौडेललाई प्रस्तुत गरिएको छ । युवा जोतिष हरिहर अधिकारी र कृष्टिन पौडेलले फिल्म शुभलभ मार्फत नेपाली फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु गर्दैछन् । सार्वजनिक पोस्टरमा रोमान्टिक लभ अवतारलाई प्रस्तुत गरिएको छ । बुद्ध इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मका प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार उदय हुन् । चैत्र १५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने शुभलभलाई पुराना निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष बाबु लोहनीले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा धर्मराज शर्मा सुवेदीको लगानी रहेको छ । पेशाले हरिहर यूवा ज्योतिष हुन् भने कृष्टिन पौडेल नर्स हुन् । दुबै जना नव कलाकार हुन् ।
‘शुभलभ’मा हरिहर अधिकारी र कृष्टिन पौडेलको अलवा डाक्टर सुर्या थापा, सरोज खनाल, राजाराम पौडेल, राजा राजेन्द्र पोखरेल, रविन्द्र झा, प्रदीप बास्तोल, अनुज पाण्डे लगायतका कलाकारको मुख्य भुमिका रहेको छ । निर्माता तथा हल सञ्चालक प्रदीप कुमार उदय ‘शुभलभ’मा अतिथी कलाकारको रुपमा देखिनेछन् । फिल्ममा हरिहर अधिकारीको कथा, अभिमन्यु निरवीको पटकथा तथा संवाद, अर्जुन पोखरेलको संगीत, रामेश्वर कार्कीको छायाँकन, रोशन विक्रम भट्टराईको द्धन्द्व, बनिष शाह र भुपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन रहेको छ ।
चारैतिर घेरिदाँ पनि अनमोल १ नं ट्रेन्डिङमा
फिल्मी फण्डा । अनमोल केसी अभिनित फिल्म क्याप्टेनको “रहर छ सँगै” बोलको गी विहीवार युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको हो । सोही दिन र समयमा टंक बुढाथोकी र अशोक दर्जीको गीत “चौरीको छुर्पि” सहित प्रदिप खड्का अभिनित फिल्म लिलिबिल्ली पनि युट्युबमा रिलिज गरिएको हो । अनमोलको गीतलाई सामाजिक सञ्जालमा घेरिने प्रयास भईरहँदा पनि “रहर छ सँगै” गीत युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो नम्वरमा परेको छ । गीत सार्वजनिक भएको ८ घण्टा देखीनै नेपालमा पहिलो नम्वरमा रहेको छ । यस्तै विभिन्न देशरुमा पनि ट्रेन्डिङ रहने क्रम जारी रहेको छ । रोमान्टिक लभस्टोरी नम्वरमा अहिलेका हिट संगीतकार अर्जुन पोखरेलले संगीत भरेको रहर छ संँगै बोलको गीतमा गायक सुगम पोखरेल र गायिका अञ्जु पन्तको स्वर रहेको छ ।
गीतमा दिग्गज धौरालीको शब्द रहेको छ । अनमोल केसी र नव कलाकार उपसना सिंह ठकुरीको अभिनय रहेको गीतमा रोमान्टिक लभ देखाईएको छ । नेपालका मनोरम हिम हृङ्खला सहितको दृश्यहरुलाई फरक तरिकाले गीतमा कैद गरिएको छ । फुटबल खेल र खोलाडीको विषयमाथी बनेको फिल्म क्याप्टेन प्रतिक्षित फिल्म हो । अनमोल केसी होम प्रोडक्शनमा निर्माण भएको फिल्मका निर्मातामा भुवन केसी रहेका छन् भने निर्देशक दिवाकर भटट्राई हुन् । फिल्ममा नव कलाकार प्रियंका एमभि, सुनिल थापा, प्रशान्त ताम्राकार, विल्सन बिक्रम राई र सरोज खानाल लगायतको मूख्य भुमिका रहेको छ । आगामी फाल्गुन १७ गते रिलिज हुने भनिएको क्याप्टेनको रहर छ सँगै बोलको गीतमा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफि रहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अनमोल र प्रदिपको भिडन्त
फिल्मी फण्डा । अहिलेका सुपरस्टार अनमोल केसी र अर्का स्टार नायक प्रदिप खड्का बीच फिल्मी बजारमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । व्यक्तिगत रुपमा एकले अर्काको वारेमा कुनै क्रिया र प्रतिक्रिया अहिले सम्म दिने गरेका छैनन् । तर पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रमा यी दुईलाई प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । अनमोल केसी र प्रदिप खड्का फिल्म क्षेत्रमा मात्र हैन सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् ।
विहीवार ओएसआर डिजिटलको आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट अनमोल केसी अभिनित फिल्म क्याप्टेनको गीत रिलिज गरिएको छ भने सोही समयमा बुढासुब्बा डिजिटलको आधिकारीक युट्युब च्यानलबाट प्रदिप खड्का अभिनित फिल्म लिलिबिल्ली अपलोड गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल युट्युब मा पनि बुढासुब्बाले प्रदिपलाई अनमोलको प्रतिस्पर्धा बनाएका छन्।
हुन त व्यवासायिक कुराले पनि यस्तो भएको मान्न सकिन्छ । त्यो पाटो भन्ने उनीहरुलाई नै थाहा होला । अनमोल केसीको गीत रिलिज भएकै दिनमा प्रदिपको फिल्म सामाजिक सञ्जालमा रिलिज हुनुमा पनि भित्री रहस्य पक्कै केही त छ नै । यता अशोक दर्जी र टंक बुढाथोकीको चौरीको छुर्पि बोलको गीत पनि आजकै दिनमा रिलिज गरिएको छ । यसरी अनमोल केसीको गीत रिलिज भएको दिनमा गीतलाई ट्रेन्डिङमा आउन नदिन चारैतिरबाट सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा घेरिएको छ ।
फिल्मी फण्डा । नायिका बर्षा राउतको आज जन्मदिन परेको छ । जन्मदिनको अवसरमा फिल्म दाल भात तरकारी टिमले बर्षाको जन्मदिनलाई विशेष बनाईदिएका छन् । फिल्मको सुटिङ सेटमै रहेको कारण केक काटेर जन्मदिनलाई दाल भात तरकारीले विशेष बनाईदिएको हो ।
फिल्मका टिमसँगै जन्मदिन मनाएकी बर्षा कति बर्ष पुगिन् भने सायद कमैलाई थाहा होला । फिल्मी फण्डालाई प्राप्त स्रोतका अनुसार बर्षा २६ बर्षकी भएकी छिन् । यो बर्ष प्रेमी संजोग कोईरालासँग लगन गाँठो कस्ने हल्ला चलेपनि टरेको छ । अर्को बर्ष बर्षाको लगन गाँठो कसिने संभावना देखिएको छ । बर्षाले भने आफुले ३० बर्षको उमेरमा मात्र बिहे गर्ने बताएकी छिन् । बर्षा अभिनित फिल्म गोपि आउँदो माघमा रिलिज हुदैछ । फिल्मी फण्डाको तर्फबाट बर्षालाई जन्मदिनको शुभकामना ।
बुलबुलको टिजर सार्वजनिक (टिजर सहित)
फिल्मी फण्डा । फिल्म बुलबुलको टिजर सार्वजनिक भएको छ । विनोद पोडेलद्वार निर्देशित फिल्मको उक्त टिजरमा नायिका स्वस्तिमा खड्का र मुकुन भुषाल फिर्चड छन् । फिल्म बुलबुललाई पुरुषोत्तम पाण्डे, अबिरल थापा, भिम थापा र राजु पौडल मिलेर बनाएका हुन् । फिल्ममा कोशिश क्षेत्री र उद्गम परियारको संगीत, रजिना रिमाल र निश्चल बस्नेतको स्वर रहेको छ ।
फिल्ममा बुद्धि तामाङ, मुकुन भुसाल, उज्वल अधिका री, दीपक क्षेत्री, जोयस पाण्डे, आशिका पाण्डे आदि कलाकारको अभिनय रहेको छ । सुसन प्रजापतिको छायांकन रहेको फिल्मलाई विनोद पौडेलले लेखेका हुन् ।
खाली हात जसिता
फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक गर्ने नायिकाहरु खाली हात, शिल्पाको के होला ?
फ्राईडे रिलिज : हलमा हरर घर, कत्तिको तर्सेलान् दर्शक ?
मंसिर ६ गते रिलिज हुँदै आर्यनको “च च हुई”
“सानो मन”को सेलिब्रेटी शो सम्पन्न
तीन महिनामा दुई फिल्मको ५१ औँ दिन
एक खड्काले अर्को खड्कालाई मिस गरेपछि (गीत)
प्रमोदको “मेरी प्रिया २” (गीत)
“सरौतो”को टिजर सार्वजनिक (टिजर)
जयवीरको “आजभोली गाउँघरमा” (गीत)
सारिकाको “बरिलै तीजमा” (गीत)
© Balami Film Entertainment Pvt. Ltd | All rights reserved. | सूचना बिभाग दर्ता नम्बर: 465 / 073 - 74 Website By : sutra